Inweta ego na ụlọ akwụkwọ - Bromley, Lewisham & Greenwich Mind
Ị nọ ebe a: Mbido > Nchịkọta ego na ihe omume > Nchịkọta ego n'ụlọ akwụkwọ
Ime ka ụlọ akwụkwọ gị sonye na ịkwado Bromley, Lewisham & Greenwich Mind abụghị naanị ụzọ dị mma isi nweta ego maka ihe metụtara mpaghara, ọ bụkwa ụzọ iji mee ka ahụike nke ọgụgụ isi mara ma melite ahụike ụmụ akwụkwọ gị.
Ihe ọ bụla ị kpebiri ime, anyị nwere ike ịnye akụrụngwa na echiche iji kwado ụlọ akwụkwọ gị ma mee ka ọ bụrụ ihe ịga nke ọma. Anyị nwekwara ike ịnye ụmụ akwụkwọ gị ahụike ọgụgụ isi na okwu ọma maka ụmụ akwụkwọ gị.
Ị maara: “50% nke nsogbu ahụike ọgụgụ isi na-amalite mgbe ọ dị afọ 14”
Hụ otu ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ siri kwado anyị.
Ụlọ akwụkwọ ụmụ nwoke Langley Park
Atlọ Akwụkwọ Primary School nke Hatcham
Secondary School nke Hayes
Dị ka akụkụ nke Afọ 9 Nke mbu Nye oru ngo, BLG Mind gara ụlọ akwụkwọ ahụ ikwu maka mkpa ahụike ahụike na ahụike dị. Fundmụ akwụkwọ ndị edepụtara ego maka uche BLG site na ịkwụ ụgwọ iji votu maka onye nkuzi ka ha nweta achịcha.
Gwa mmadụ okwu
Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka ma ọ bụ enyemaka ọ bụla biko nye ndị otu anyị na-akpakọba ego oku na 020 3328 0365, email fundraising@blgmind.org.uk ma ọ bụ mezue ajụjụ ụdị n'okpuru.
Ozi gị (nhọrọ)
Kpọtụrụ anyị maka ịchọta ego ma ọ bụ enyemaka onyinye
Nweta mmụọ nsọ site na ịnakọta ego ndị ọzọ
Were Ultra Challenge tinye onwe gị n'ule
Virtual Virgin Money na London Marathon 2021